နိုင်ငံခြားခရီး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
နိုင်ငံခြားခရီး	ဒီနှစ် နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ဖို့ ရှိပါသလား။ နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်ရင် အဆင်ပြေပါ့မလား။
သဘောင်္လိုက်ဖို့ကိစ္စလုပ်နေတာ အဆင်ပြေပါ့မလား။ လက်ရှိသဘောင်္ကနေ နောက်သင်္ဘောတစ်ခုကို ပြောင်းရင်အဆင်ပြေပါ့မလား။
နောက်ပြောင်းရမဲ့ သဘောင်္မှာ အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား။ ဒီတစ်ခေါက်ထွက်မဲ့ သဘောင်္ခရီးစဉ် အဆင်ပြေပါ့မလား
နိုင်ငံခြားခရီးထွက်တာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါ့မလား။ နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်ရင် ငွေကြေးစုဆောင်းမိပါ့မလား။ နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်ရင် ဟိုမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်ရှိနိုင်သလား။
နိုင်ငံခြားမှာ အပြီးနေရကိန်းရှိသလား။ မွေးရပ်မြေမှာ ပြန်နေရမလား။
<br /> 32 comments on “နိုင်ငံခြားခရီး”	Amy on August 26, 2010 at 1:38 pm said:
I want to know my life
ayethazin on August 27, 2010 at 4:07 pm said:
ကျမ ဒီနှစ်ထဲ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် တခု ထွက်ဖုိ့ပြင်နေပါတယ်။ ဒိနှစ်ထဲ ထွက်ရမရ သိချင်ပါတယ်ရှင်
GINGO on September 4, 2010 at 10:47 am said:
I want to go foreign with scholarshipment.
su su on September 4, 2010 at 4:50 pm said:
naymin on September 15, 2010 at 6:14 am said:
ဒီနှစ်ထဲမှာ နိုင်ခြားခရီးထွက်ရဖို့ ရှိပါသလား၊
sithuaung on September 15, 2010 at 4:13 pm said:
sithuaung on September 15, 2010 at 4:18 pm said:
ဘ၀ဆို ဆိုးတစ်လည့် ကောင်းတစ်လည့် ပါ
အောင်အောင် on September 18, 2010 at 8:51 pm said:
ကျွန်တော်ကတော့ဘာအစီစဉ်မှမရှိထားပါဘူးဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိတယ် သွားချင်တယ် ရောက်နိုင်ပါ့မလားဆရာ
San San Win on September 20, 2010 at 3:40 pm said:
ဒီနှစ်နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ဖို့ ရှိပါသလား ? ရှိရင်ကောင်းနိုင်သလား?
Htet Eu Shwe Ye @ Diran on September 20, 2010 at 9:09 pm said:
I will go to China next year with my Chinese Teacher. Will this event will be good either or not? I born on4August , 1998. I will trip on3March, 2011.
thinthin on October 6, 2010 at 10:49 am said:
ttw on October 14, 2010 at 5:05 pm said:
ကျွန်မ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားရဖို့ ရှိပါသလား၊ရှိရင်ကောင်းပါသလား၊
မွေးသက္ကရာဇ်က 28-5-1966 ပါ။
လျှပ်တပြတ်ပေါ်လာတဲ့ဂဏန်းက (1) ပါ။
nc on October 15, 2010 at 6:48 pm said:
နိုင်ငံ အကူးအပြောင်းရှိမလား? If you don’t mind, please give meafavour by adding this question in the question pool. Thanks.
သန်စင် on October 19, 2010 at 12:58 pm said:
zayar on October 24, 2010 at 12:55 pm said:
zayar on October 24, 2010 at 12:56 pm said:
Thein Tun Aung on October 28, 2010 at 12:06 pm said:
ei tar tun on November 3, 2010 at 2:16 pm said:
Myat on December 12, 2010 at 9:36 pm said:
ဆရာရှင့် ကျွန်မက UN နဲ့ တတိယနိုင်ငံကို ဘယ်တော့သွားနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ 30.12.1981ပါ ရာဟူးဂဏန်းက (78)ပါရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ွှသီတာအောင် on February 9, 2011 at 11:11 am said:
ကျွန်မ ဒီနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားရဖို့ ရှိပါသလား၊ရှိရင်ကောင်းပါသလား၊
မွေးသက္ကရာဇ်က 14-9-1979 ပါ။
လျှပ်တပြတ်ပေါ်လာတဲ့ဂဏန်းက (၅) ပါ။
ယမုံ on February 18, 2011 at 6:21 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးရဲ့မွေးနေ့က(24.2.1988) ပါရာဟုသမီးပါ သမီးသိချင်တာက သမီးအစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်ခွင့်ရှိလား အထူးသဖြင့် ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်
နောက်ပြီး သမီးဘယ်အသက်အရွယ်လောက်မှာအိမ်ထောင်ကျမလဲသိချင်ပါတယ် အပျိုကြီးဇာတာပါမပါသိချင်ပါတယ် အခုအချိန်ထိအချစ်ရေးမှာ အရှုံးတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်
khinthida on July 25, 2011 at 3:53 pm said:
lai on November 16, 2011 at 1:09 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးရဲ့မွေးနေ့က(27.11.83, sunday)ပါ.
နောင်နှစ် 2012 မှာ (singapore) နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားရှာမလို့စီစဉ်ထားပါတယ်.
lai on November 16, 2011 at 1:12 pm said:
နောင်နှစ် 2012 မှာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားရှာမလို့စီစဉ်ထားပါတယ်.
khinkhinmoe on March 2, 2012 at 3:52 pm said:
ပို့စ် အသစ်တင်ပါအုန်းရှင်။ မတ်လအတွက်ဟောစာတမ်းလဲ တင်ပေးစေချင်ပါသည်။
tun tun on December 20, 2012 at 2:55 pm said:
everything okay Thank Sir
Su Thet Paing on December 26, 2012 at 2:26 pm said:
ဆရာရှင့် ကျွန်မအခုနေထိုင်တာကမလေးရှားမှာပါ။ တတိယနိုင်ငံ (အမေရိကန်) ကိုဆက်ထွက်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်တော့လောက်ထွက်ခွင့်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင့်။ဟူးရားဂဏန်းက 103 ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မက 17.05.1983 ခု၊ အဂါင်္ သမီးမနက် 10 နာရီ 17 မိနစ်မွေးတာပါ။အမျိုးသားက 22.01.1978 တနင်္ဂနွေသားပါ။ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ 12.05.2011 ကြာသပတေးသမီးပါ။
Tun Tun on January 26, 2013 at 1:54 pm said:
blackhold on March 26, 2013 at 7:27 pm said:
Su lae Yee Aung on April 25, 2013 at 1:44 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးက ဘဏ်ဝန်ထမ်းပါ။ လက်ထောက်မန်နေဂျာပါ။မွေးနေ့ က 21.7.1987 ပါ။ အင်္ဂါသမီးပါရှင့်။
နိုင်ငံခြား ပညာသင်..လေ့လာရေး ဒီနှစ်ထဲမှာ ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ဖြေပေးပါရှင်။
Wut Yi on May 20, 2013 at 3:59 pm said:
စင်ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရန်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်၊ ၇ လပိုင်း (သို့) ၈ လပိုင်းအတွင်း သွားချင်ပါတယ်ဆရာ၊ ဘယ်ကာလ မှာ အဆင်ပြေနိုင်မလည်း သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
Wut Yi on May 20, 2013 at 4:04 pm said:
မွေးသက္ကရာဇ်က ၂၂.၁၀.၁၉၈၇၊ နံနက် ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ် ပါ။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,744)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,408)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,202)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,042)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,069)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,378)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,204)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,709)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,750)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,402)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,354)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,213)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,161)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,411)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,074)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,758)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,754)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,291)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,780)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,743)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,565)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,353)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,165)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,161)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,060)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !